China ISO satifiketi ecocekileyo igumbi ucango oludityanisiweyo iinkqubo ze panel eps eludongeni Manufacture and Factory | Ezong Iqela
I-ISO enesatifikethi se-ISO yegumbi elicocekileyo leenkqubo zokuvala umnyango ze-eps wall panel
kulula ukucoca & antibacterial
Iphaneli evela kwiFormica®
Iingcango ze-HPL zikwabizwa ngokuba ziingcango zegumbi lezonyango ezicocekileyo okanye iingcango ezilaminethiweyo ezinoxinzelelo oluphezulu ezinesakhiwo esilula kunye neenkqubo zofakelo. Ucango lwegumbi elicocekileyo lusetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezininzi njengamagumbi esibhedlele, amaziko onyango, amaziko ezempilo, ikhemesti okanye iifektri zombane. Njengomenzi wamacango esibhedlele, i-EZONG inokukunika iingcango ezikumgangatho ophezulu we-HPL ngamaxabiso afanelekileyo. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha.
Ucango lwethu olunehenjisi lunemiqulu yencwadana kunye nezenzekelayo, ngokweemfuno zabathengi, inokuqwalasela igama eligqithisiweyo, ukufakwa, ukuqaphela ubuso kunye nezinye iindlela zokuvula.
Igqabi locango elomeleleyo
Isakhelo socango kunye negqabi locango zamkele ubume bokucinezelwa kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza (inombolo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza: 2015210332817), umphezulu ogudileyo.
Iprofayili ye-6063-T5Primary aluminium, ukusebenza kakuhle kokuchasana nokungqubana.
Isigqubuthelo se-aluminiyam si-rust-proof, kwaye umnyango womelele ngakumbi.
Iifestile ezichasene nokungqubana kunye nezingangeni moya
Ikhadi elidityanisiweyo elidityanisiweyo elidityanisiweyo elidityanisiweyo, elichasene nokungqubana.
Sebenzisa iglue ye-3M ukuze ufumane umoya ongcono.
Kukho i-molecular sieves kwiglasi ephindwe kabini, engenamanzi, umoya ococekileyo.
Umcu wokutywina oqinileyo ngakumbi
Umtya we-silicone unokuqina okuhle, ukutywinwa okulungileyo kunye nobomi benkonzo ende.
Uhlobo lwe-snap-in oluvaliweyo lwesakhiwo socango, luqina ngakumbi.
Uyilo oluphindwe kabini lwe-shrapnel, lugudileyo kwaye luzinzile, umoya olungileyo wokuxineka.
Iphaneli yentsimbi yombala: Ixabiso eliphezulu kunye nokusebenza okungcono kunombala weplate yentsimbi eqhelekileyo.
Iphaneli yebhodi ekhethekileyo yonyango echasene ne-fold: I-brand yenkulungwane ye-Fumeca, i-ion yesilivere ye-antibacterial kunye nesicoci.
Igudile kwaye icocekile
Ucango lonke luthe tyaba kwaye akukho lula ukufihla uthuli. Ikona kunye nomnyango wokuyila i-arc yoyilo, intle kunye nokhuseleko oluchasene nokungqubana
yonke iSmoolth:Iifestile zeglasi ezingqukuva zintle ngakumbi.
Iikona ezicekethekileyo ezingqukuva:ixabiso eliphezulu lokuhombisa.
Isakhiwo somnyango wesibhedlele
Ngaphambili: Iingcango zeglasi zangaphakathi zesibhedlele ezingenamoya zekliniki kunye nesibhedlele
Okulandelayo: Ucango lwesibhedlele olunefestile yeglasi okanye olungenalo lwegumbi lezempilo kwigumbi lezempilo
ucango lwegumbi elicocekileyo
ipaneli yodonga lwe-eps
Anti bacteria HPL gungxula laminate Ucango for hospi...
Umsebenzi womlilo kufutshane nocango lwentsimbi engenastainless Pharm...
Ucango lwephaneli ye-HPL yokugungxula ucango olulaminethiweyo lweho...
Ucango lwesibhedlele olunefestile yeglasi okanye olungenayo ...
Ucango lwentsimbi lwegumbi lokucoca kumzi-mveliso wokutya okanye i-cosmeti...
ucango lwethiyetha kwindawo yonyango